Gbasara Anyị - Foshan Nenwell Import & Export Trading Co., Ltd.
Ihe ngosi achicha
Ihe ngosi Ice Ice
Ndepụta nke friji
Marklọ ahịa Ihe Ngosi
E guzobere NENWELL na 2007. Site ọtụtụ afọ nke ịrụsi ọrụ ike na mbọ, Anyị emeela ugbu a dịka ọkachamara, onye nrụpụta a pụrụ ịdabere na ya na onye na-azụ ngwaahịa ngwaahịa friji dị ka ihe ngosi kwụ ọtọ, ihe ngosi achicha, ihe ngosi ice cream, ihe mgbochi obi, obere mmanya refrjiraeto wdg. .Ndị ahịa ahụ nwere ike ịhọrọ ndepụta ngwaahịa anyị, ma ọ bụ anyị nwere ike rụpụta dịka atụmatụ ndị ahịa si dị. Anyị nwere otu ndị ọrụ ntanetị na ndị ọrụ nwere afọ iri nke ahụmịhe na imepụta na imepụta ihe. Anyị nwekwara sistemụ njikwa njikwa siri ike iji hụ na ngwaahịa anyị ọ bụla nwere ike mezuo ogo dị mkpa n'aka ndị ahịa. Ọzọkwa anyị na-enye na magburu onwe mgbe-ire ọrụ ka afọ ju ahịa anyị bụrụ na ha nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ nsogbu. Anyị na-elekwasị anya na nyocha dị mma, okwu gbasara logistic ma nye ndị na-eweta ngwaahịa / ụlọ ọrụ ọhụrụ na China maka gị na ụlọ ọrụ gị. Na otu okwu, anyị nwere ike ijikwa ọrụ mbupụ dum maka ndị ahịa anyị. Companylọ ọrụ anyị na-achọ ịnye onye anyị na ya na-arụkọ ọrụ ọnụ nke kachasị ọrụ nke kachasị ngwaahịa, ogo, ọnụahịa na ọrụ. Dabere na "Ndị mmadụ gbakwasara, na-enye ọrụ bara uru", isi ọrụ na echiche na mutul na-akwado, dabere & ogologo oge mụ ekwenye mmekọrịta, nakwa dị ka mgbe niile ọhụrụ ọrụ echiche, anyị ga-enye ndị ọzọ bara uru ọrụ maka ahịa na ọha mmadụ. Site na-aga n'ihu mgbalị na omume nke ndị ọrụ niile, ugbu a, anyị nwere a set nke dịtụ emebibeghị ọrụ ụzọ na-arụ ọrụ usoro inye mma ọrụ maka anyị imekọ ihe ọnụ mmekọ na ndị ahịa.
Mpi ngwaahịa akara na a pụrụ ịdabere na àgwà
Advanced n'ichepụta ụlọ ọrụ
Ndị ọkachamara QC
Nka na ụzụ na akụkụ ahụ mapụtara
Ntị nkọwa na ọrụ ngwa ngwa
ngwa nju oyi na ngwaahịa ngwa
· Itinye aka na ụdị ihe ngosi ọhụụ nke mba ụwa kwa afọ. Nke a na-eme ka anyị bụrụ ọkachamara na nlezianya na ọnọdụ ahịa. · Inye ma kwado ndị ahịa ozi ahịa na mmepe ngwaahịa. · Nwee ike ịzụlite ngwaahịa ọhụrụ na ndị ahịa ma ọ bụ jiri aka ha zụlite. · Mara nke ụlọ ọrụ si mba ọzọ na nke anụ ụlọ na nke na-eweta ihe enyemaka .. · Na-arụkọ ọrụ na ndị nrụpụta dịgasị iche iche maka ihe karịrị afọ 20. · Ikike zuru oke nke ịkwụ ụgwọ ego. Nọgide na-agbanwe agbanwe nke mgbanwe ngwaahịa ahịa. Jikwaa oge kachasị mma ịzụta Nyere ndị ahịa aka ịchekwa ego.
ọrụ ka mma
Site na-aga n'ihu mgbalị na omume nke ndị ọrụ niile, ugbu a, anyị nwere a set nke dịtụ emebibeghị ọrụ ụzọ na-arụ ọrụ usoro inye mma ọrụ maka anyị imekọ ihe ọnụ mmekọ na ndị ahịa.
Nwee ọhụụ zuru ụwa ọnụ na mmetụta uche dị nro nke ụwa, nwere ike mepụta ngwaahịa ọhụrụ ma ọ bụ ahaziri ya na ndị ahịa. Bega n'ihu ahịa, iji merie karịa ahịa ahịa na uru ya na ndị ahịa ọnụ. Mgbe niile nyere irè ahịa mmepe aro maka dị iche iche ahịa, akọ ahịa na friji ngwaahịa ahụmahụ, na-enyere ndị ahịa ngwa ngwa ogide ahịa òkè!
Ezigbo ahụmịhe ọrụ na ndị otu ọkachamara na-arụ ọrụ iji nye azịza kachasị mma maka ndị ahịa.o nwere ike ịnye oke osimiri na ikuku ụgbọ elu kachasị mma, atụmatụ nnyefe na ịzụta ọnụahịa ịzụta. Nzaghachi kachasị:Azịza ọsọ ọsọ na ajụjụ niile n'oge nrụpụta usoro. Ozugbo na ọkachamara nzaghachi na àgwà mbipụta!
Ngalaba njikwa njikwa
Nenwell nwere ndị ọkachamara na-achịkwa otu. Nyochaa nke ọma na ịmepụta usoro ọ bụla. Anyị ga-eme nnyocha nyocha maka ndị ahịa mgbe emechara. Ozugbo na ọkachamara nzaghachi na àgwà mbipụta! Nwere ike ịbụ onye nnọchianya nke oversea customers.Colborative na factory ịzụlite ngwaahịa na àgwà mma.
ọwụwa anyanwụ africa trading trading
N'ime afọ iri gara aga ngwa ngwa, Foshan Nenwell Trading Co., Ltd. enweela ihe ịga nke ọma guzobere usoro azụmahịa tozuru oke, ma nweta ikike iji nye ndị ahịa anyị ọrụ dị ogologo oge. Iji chọọ isi uto ọhụrụ iji bulie oke ahịa ahịa a, ụlọ ọrụ anyị ugbu a na-enyocha ahịa mba ofesi, na nso nso a enwegoro ihe ịga nke ọma na ngalaba Kenya, East Africa, na-ebute ngwaahịa kachasị mma na ọnụ ahịa asọmpi maka ndị ahịa mpaghara. .
Copyright - 2010 - 2021: All Rights echekwabara.